မသာပါးစပ်ထဲက နှိုက်စားသူများ။ မသာပါးစပ်ထဲကတောင်နိူက်ယူတဲ့ အဆင့်ရောက်နေပါပြီလား - Tameelay
မြန်မာလူမျိုးဖြစ်ပါလျက် အမိမြန်မာနိုင်ငံသို့အသက်မပါသည့်ခန္ဓာအားပြန်လည်ဝင်ခွင့်ပြုရန်အတွက်ချို့တဲ့သည့် မိသားစုများအနေဖြင့်အလွန်ခက်ခဲလှပေတော့သည်။
ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်၍ ကျွန်တော့ထံသို့စာတစ်စောင်ဝင်လာသည်ကို ဖတ်ရှုစေခြင်သည်။
(…..) နိုင်ငံ မှ မြန်မာနိူင်ငံသို့ နာရေးများပြန်ပို့ ရာတွင် မြန်မာနိူင်ငံရှိ (…..) လေကြောင်းလိုင်းကာဂိုဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော ( – ) ဌာနမှ (……) ဆိုသူသည် နာရေးတစ်လောင်း (၇) သောင်းမှ (၈) သောင်းကျော် တရားဝင်မိသားစုများထံတောင်းခံပါသည်။
မိဘများမပေးပါက သေဆုံးသူ အလုပ်လုပ်ကိုင်သည့် (…..) နိူင်ငံလေဆိပ်သို့ နာရေးသယ်ဆောင်ခွင့် မပြုနိုင်ကြောင်း မသိနားမလည်သည့် အပူသည်ကာယကံရှင်မိသားစုများအားခြိမ်းခြောက်သည့်ပုံစံဖြင့်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်နေပါသည်။
ပြည်တွင်း ပြည်ပ လူမူကူညီရေးအသင်းများက(အခမဲ့) ကူညီနေသော်လည်း ယင်းရန်ကုန်ရှိငွေကြေးအဓမ္မတောင်းခံနေသော ထိုသူအတွက်ပိုက်ဆံလာပေးခိုင်းသလိုဖြစ်နေပါသည်။
ထိုသူသည် ရန်ကုန်လေဆိပ်ရှိ (….) နိုင်ငံလေကြောင်းလိုင်းကာဂိုဌာနတွင်နေ့စဉ်တောင်းရမ်းနေပါသည်။
မည်ကဲ့သို့ အရေးယူလျင်ရနိူင်ပါမည်လဲဟု တင်ပြပါသည် ။
နာရေးကူညီမူ(ရန်ကုန်) မှ ကာယကံရှင်၏နေရပ်ဒေသသို့ ကူညီပို့ဆောင်ရမည့်နာရေးများဖြစ်သဖြင့်တင်ပြအပ်ပါသည်။
မှ/ ( …..နိုင်ငံ မှမြန်မာပရဟိတအသင်း)
အော်… ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ လာဒ်ပေးလာဒ်ယူကိစ္စက မသာပါးစပ်ထဲကတောင်နိူက်ယူတဲ့အဆင့်ရောက်နေပါပြီလားဟုတွေးတောရင်းဖြင့်…
ဒါ့ကွောငျ့ ပွောပါတော့မညျ သမ်မတကွီးခငျဗြား။
ပွညျပနိုငျငံမြားတှငျ မိသားစုနှငျ့ခှဲခှါ၍ဝမျးရေးအတှကျ ပငျပနျးဆငျးရဲခံကာရှာဖှစေားသောကျပွီးပွညျတှငျးရှိမိသားစုမြားထံသို့ထောကျပံ့ငှပေို့ပေးနရေရှာသောမွနျ မာနိုငျငံသားမြား ပွညျပနိုငျငံတှငျဆုံးပါးသှားသညျ့အခါ ကနျြရဈခဲ့သောမိသားစုမြား၏ဆန်ဒအရမွနျမာပွညျတှငျးသို့သဆေုံးသှားရရှာသညျ့မွနျမာနိုငျငံသားမြား၏ရုပျခန်ဓာအား လယောဉျဖွငျ့သယျဆောငျခဲ့ရာတှငျ လူမြိုးခွား၊ဘာသာခွားပွညျပနိုငျငံမှဝနျထမျးမြားသညျ လိုလသေေးမရှိကူညီပေးခဲ့၍ ထိုသဆေုံးသူ မွနျမာနိုငျငံသား၏ရုပျခန်ဓာမှာမွနျမာပွညျရနျကုနျလဆေိပျသို့လြောလြူစှာရောကျခဲ့သျောလညျး သူ၏ရုပျခန်ဓာအားမွနျမာပွညျလဆေိပျတှငျ လှယျကူစှာထုတျခှငျ့မရသညျမှာ အဘယျ့ကွောငျ့နညျး ဟုကြှနျတျောစဉျးစားမိတော့သညျ။
မွနျမာလူမြိုးဖွဈပါလကျြ အမိမွနျမာနိုငျငံသို့အသကျမပါသညျ့ခန်ဓာအားပွနျလညျဝငျခှငျ့ပွုရနျအတှကျခြို့တဲ့သညျ့ မိသားစုမြားအနဖွေငျ့အလှနျခကျခဲလှပတေော့သညျ။
ဤအကွောငျးအရာနှငျ့ပါတျသကျ၍ ကြှနျတော့ထံသို့စာတဈစောငျဝငျလာသညျကို ဖတျရှုစခွေငျသညျ။
(…..) နိုငျငံ မှ မွနျမာနိူငျငံသို့ နာရေးမြားပွနျပို့ ရာတှငျ မွနျမာနိူငျငံရှိ (…..) လကွေောငျးလိုငျးကာဂိုဌာနတှငျ တာဝနျထမျးဆောငျသော ( – ) ဌာနမှ (……) ဆိုသူသညျ နာရေးတဈလောငျး (၇) သောငျးမှ (၈) သောငျးကြျော တရားဝငျမိသားစုမြားထံတောငျးခံပါသညျ။
မိဘမြားမပေးပါက သဆေုံးသူ အလုပျလုပျကိုငျသညျ့ (…..) နိူငျငံလဆေိပျသို့ နာရေးသယျဆောငျခှငျ့ မပွုနိုငျကွောငျး မသိနားမလညျသညျ့ အပူသညျကာယကံရှငျမိသားစုမြားအားခွိမျးခွောကျသညျ့ပုံစံဖွငျ့ပွောဆိုမှုမြားပွုလုပျနပေါသညျ။
ပွညျတှငျး ပွညျပ လူမူကူညီရေးအသငျးမြားက(အခမဲ့) ကူညီနသေျောလညျး ယငျးရနျကုနျရှိငှကွေေးအဓမ်မတောငျးခံနသေော ထိုသူအတှကျပိုကျဆံလာပေးခိုငျးသလိုဖွဈနပေါသညျ။
ထိုသူသညျ ရနျကုနျလဆေိပျရှိ (….) နိုငျငံလကွေောငျးလိုငျးကာဂိုဌာနတှငျနစေ့ဉျတောငျးရမျးနပေါသညျ။
မညျကဲ့သို့ အရေးယူလငျြရနိူငျပါမညျလဲဟု တငျပွပါသညျ ။
နာရေးကူညီမူ(ရနျကုနျ) မှ ကာယကံရှငျ၏နရေပျဒသေသို့ ကူညီပို့ဆောငျရမညျ့နာရေးမြားဖွဈသဖွငျ့တငျပွအပျပါသညျ။
မှ/ ( …..နိုငျငံ မှမွနျမာပရဟိတအသငျး)
အျော… ကြှနျတျောတို့နိုငျငံ လာဒျပေးလာဒျယူကိစ်စက မသာပါးစပျထဲကတောငျနိူကျယူတဲ့အဆငျ့ရောကျနပေါပွီလားဟုတှေးတောရငျးဖွငျ့…
ဒီနှစ်မြန်မာအိုင်ဒေါ ပြိုင်ပွဲမှာတော့ Top2Finalist ကိုရောက်ရှိလာတဲ့သူ (၂) ဦးလုံးဟာ ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကို အဆက်မပြတ်ခံစားနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပညာရေး၊ လူမှုရေး ဘဝပေးအခြေအနေ အမျိုးမျိုးကို နောက်ကြောင်းလှန်ပြီး တိုက်ခိုက်မှုတွေဟာ ပြင်းထန်လွန်းလှပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်ဖြိုးမြတ်အောင်အနေနဲ့ကတော့ ဒီလိုဝေဖန်မှုတွေအပေါ် သူ့ရဲ့ သဘောထားအမှန်ကို ဖွင့်ချလိုက်ပါတယ်။ “ခွန်အားပေးတာကတော့ …
Body အမိုက်စားနဲ့ နတ်မိမယ်လေး ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုရီးယားမလေး
Body အမိုက်စားနဲ့ နတ်မိမယ်လေး ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ ကိုရီးယားမလေး ကိုရီးယားမှာ အရမ်းကိုနာမည်ကြီးနေတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။လှပပြီး ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည်အလှနဲ့ အပိုအလိုမရှိ ကျစ်လစ်လှပတဲ့ သူမရဲ့ body အလှတွေကြောင့် ပုရိသတွေ ရဲ့ သဲသဲ လှုပ်ဝန်းရံခံနေရသူပါ။သဲသဲလှုပ်နေကြတာ မလွန်ဘူးဆိုတာကိုတော့ သူမရဲ့ ပုံတွေကို …
GFatt နဲ့ နန်းဆုရတီစိုးတို့ နှစ်ဦးကတော့ ၀ါသနာတူ အနုပညာရှင်စုံတွဲလေးတစ်တွဲအဖြစ် ပရိတ်သတ်တွေက သဘောတူထားကြပါတယ် ။ အလုပ်ခရီးတွေ ထွက်ရလဲ အတူတူ ပွဲတွေဖျော်ဖြေရလဲ အတူတူမို့ အမြဲ အတူရှိနေတတ်ကြတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်က ရံဖန်ရံခါ သူတို့ ပရိတ်သတ်တွေ အတွက် အတူတူ Live တွေတောင်လွှင့်ပေးတတ်ပါတယ် ။ …